Bulshada Ceerigaabo Oo Dhoolatus Taageero Ku Qaabilay Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Iyo Ballamaha Uu U Qaaday - Somaliland Post
Home News Bulshada Ceerigaabo Oo Dhoolatus Taageero Ku Qaabilay Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Iyo Ballamaha...
Ceerigaabo (SLpost)- Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Waddani ahna musharraxa Madaxweyne Dr Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa ololaha doorashada kala qayb qaatay taageerayaashiisa gobolka Sanaag. Musharrax Cabdiraxmaan Cirro olole hadh iyo habeen ah kala qayb galay bulshada u riyaaqsan isbedelka uu hoggaaminayo. Musharraxa ayaa xilli hebeenimo ah degmada Huluul ee gobolka Sanaag iyo magaalada Laasdoomaare kaga qayb galay isu soo baxyo ay sameeyeen bulshada u heellan siyaasadda Waddani halkaas oo uu kala kulmay soo dhawayn iyo taageero laxaad leh.
Musharrax Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay in gobolka Sanaag yahay halka beelaha Somaliland ka tafiirmeen, islamarkaana uu yahay gobol balaadhan oo qani ku ah khayraad kala duwan laakiin, aan waxba laga qaban. Waxa uu sheegay“Gobolkan wuxuu Waddanka ka yahay 40%. Waa gobol leh khayraad fara badan; wuxuu leeyahay bad dheer, wuxuu leeyahay dekedo caan ah oo ay Xiis iyo Maydh ka mid yihiin. Waa gobol ku habboon ka faa’iidaysiga kalluumaysiga iyo khayraadka badda. Xisbiga Waddani waxa qorshaha ugu jira in laga faa’iidaysto khayraadka badda oo ay ka mid yihiin ka shaqaysiinta dekeddaha Maydh iyo Xiis. Gobolkani wuxuu leeyahay khayraad aynaan ka faa’iidaysan oo ah Loox gobolka Sanaag leeyahay. Markii u dambeysay ee aan Soomaaliya ka shaqaynayay looxa ugu badan ee laga samayn jiray Furniture-ka waxa laga keeni jiray gobolka Sanaag laakiin, Somaliland ahaan kamaynu faa’iidaysan waxaase xisbiga Waddani u qorshaysan in warshado looxa ah oo warqaddaha soo saara laga sameeyo gobolka Sanaag.” Sidaas ayuu yidhi musharrax Cabdiraxmaan Cirro.